Momba anay - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Machining Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2010, miorina ao amin'ny "World Factory" -Dongguan, Sina, manarona faritra mihoatra ny 20.000 metatra toradroa, manam-pahaizana manokana amin'ny fanodinana ireo milina marina ary nandalo ny fanamarinana ISO9001: 2015.
Azontsika atao ny manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa, vokatra mifandraika amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fiara, angovo vaovao ary sehatra hafa. Mba hiantohana ny fitakiana kalitaon'ny mpanjifanay dia nanafatra fitaovana fanodinana mandroso sy fitaovana fitiliana toy ny Machine dimy axis (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Grinder anatiny / ivelany, Laser Cutting, 3D CMM, Fandrefesana haavo sy mpandinika fitaovana sns avy any Alemana, Japon, Suisse ary Etazonia. Ny orinasa dia manana fitaovana fikirakirana mazava tsara sy rafitra fitantanana kalitao hentitra, ny kalitaon'ny tapany marina dia afaka mameno ny fenitra indostrialy sy ny vokatra amidy ampitan-dranomasina.
Ny fitaovana iraisanay dia vy vy, aliminioma, varahina, vy ambany karbaona, plastika injeniera ary karazana vy hafa. Azontsika atao ihany koa ny manome fitsaboana hafanana sy fitsaboana isan-karazany ho an'ny mpanjifa: polishing, anodizing, galvanizing, nickel plating, plating volafotsy, passivation ary famafazana vovoka, sns.
Rehefa afaka folo taona ny fampandrosoana, K-Tek dia tsy vitan'ny hoe manana mpiasa matihanina sy teknika marobe ary ekipa fitantanana tena tsara, fa manana ekipa mpivarotra tena tsara koa. Mba hampahafantaran'ny mpanjifa bebe kokoa antsika, mandeha matetika amin'izao tontolo izao izahay handray anjara amin'ny fampirantiana, toa an'i Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Alemanina, Japon sns. Fantatray fa mpanjifa marobe avy amin'ny fampiratiana, miaraka amin'izay, maro ny mpanjifa vahiny tonga mitsidika ny orinasa K-Tek ary niresaka momba ny fiaraha-miasa. Ny fanohananao no fampaherezana lehibe indrindra ho anay. Manantena koa izahay fa hanome serivisy fanodinana milina avo lenta ho an'ny mpanjifa mila izany. Manasa anao am-pahatsorana izahay hiara-hiasa sy hiara-mandroso.